प्रदेश नं. १ मा संयुक्त प्यालन विजयी « Loktantrapost
प्रदेश नं. १ मा संयुक्त प्यालन विजयी
२३ बैशाख २०७५, आईतवार १०:४९
झापा, २२ बैसाख । नेपाल पत्रकार महासंघ १ नम्बर प्रदेशको १४ जिल्लाकै मतपरिणाम आएको छ । प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरको गठबन्धन सबै पदमा विजयी बनेको छ ।
सबै जिल्लाका निर्वाचन समितिले दिएको प्रारम्भिक परिणाम अनुसार विक्रम लुइँटेल ९ सय ३१ प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् । उनका प्रतिस्प्रधि गोपाल देवान १६१ प्राप्त गरेका छन् । उपाध्यक्षमा सोमनाथ सुसेलीले ९ सय २३ प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् भने उनका प्रतिस्प्रधि विजय खतिवडा १५६ प्राप्त गरेका छन् । महिला उपाध्यक्षमा स्मिता निरौलाले ६९७ प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् । उनकी प्रतिस्प्रधि मनिता चाम्लिङले २१० मत प्राप्त गरेकी छन् । महासचिवमा विवेक गौतम ८८४ मत प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् । उनका प्रतिस्प्रधि कमन देवानले १९१ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी समवेशी सचिवमा बुद्धवीर राई ९०० प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् भने उनका प्रतिस्प्रधि सन्तवीर लामा १७७ प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी खुला सदस्यमा डिल्लिराम खतिवडाले ९४०, तिर्थ सिग्देलले ९६९, बुद्धिप्रसाद लामिछाने ९३१, विपेन्द्र गौतम ९०० र शशी कोइराला ८६७ मत प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् । उनीहरुका प्रतिस्प्रधि फिपराज लिम्बू १८७ले मत प्राप्त गरेका छन् ।
मधेसी सदस्यमा जयकृष्ण यादवले ९०४ र ब्रम्हदेव यादवले ९०८ मत प्राप्त गरी विजयी बनेका छन् । उनका प्रतिस्प्रधि श्यामसुन्दर सुतिहार १७७ मात्र प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम महासंघको केन्द्रीय कार्यालयले घोषणा गर्न बाँकी छ । तिन ठूला संगठनका बिरुद्ध निर्वाचन प्रतिस्प्रधामा उत्रिउको आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले सम्मानजनक मत पप्त गरेको छ ।